Dare reParamende rasheedza gurukota rinoona nezvekuchengetedza kwemukati menyika, VaKazembe Kazembe, kuti vazoritaurira mamiriro akaita kuchengetedzwa kwenyika ku miganhu ye Zimbabwe zvichitevera kusungwa panhandare yendege mu South Africa nemusi we Svondo kwechizvarwa cheZimbabwe, Tashinga Nyasha Masinire, akange achiedza kubudisa zvisiri pamutemo ghoridhe rinokosha zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezvitatu zvemadhora eku America (US$783 000).
Mutauriri weParamende, VaJacob Mudenda, vakazivisa gurukota re zvemutemo, VaZiyambi Ziyambi, kuti vazivise VaKazembe Kazembe kuti paramende inoda kunzwa kubva kwavari pamusoro penyaya iyi zvichitevera chikumbiro chakabva kumumiriri weMDC Alliance weDzivarasekwa mudare re, VaEdwin Mushoriwa.
VaMushoriwa vaudza Studio 7 kuti makomiti eParamende anoona ne zvekuchengetedzwa kwe mukati menyika nere zvekudzivirirwa kwenyika akamboita ongororo akaona kuti zvicherwa zviri kubudiswa munyika zvisiri pamutemo, vachiti ikozvino zvave kuwedzera.
Pataenda pamhepo, VaZiyambi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
VaMushoriwa vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rakamirira kunzwa kubva kuna VaKazembe.